1990 मा, Togliatti घटना मा कारखाना VAZ भयो। क्लासिक "छिनो" 2109, सार्वजनिक-मनपर्ने "नौ" सामान्य रूपमा, केही थप Bells र whistles सैलून दायरा नयाँ शरीर प्राप्त र, छ। तथापि, मा सानो सुधार गर्ने साधन प्यानल उपभोक्ता र विभिन्न स्विच प्रभावित छैन। मा VAZ 21099 मूल्यांकन देखि रूपमा गिर एक cornucopia। सबै ध्यान मिसिन को रियर केन्द्रित थियो। नौ तेज hatchback एक भद्दा पालकी भएको छ। शरीर को सबै दृश्य गतिशीलता, भङ्ग गरिएको छ पछाडिको बम्पर गर्न छत बाट लाइन असफल भएको छ, नयाँ बुट प्रोफाइल अस्पष्ट थियो, र सामान्य मा, यो पर्याप्त aesthetically खुसी छ।
म सबै भन्दा मोटर वाहन विशेषज्ञहरु, नयाँ मिसिन मूल्याङ्कन र आफ्नो छाप दिने मौका थियो जो को राय retell। नयाँ नौ को रोमानियन Dacia, एक दोषपूर्ण डिजाइन आदिम मिसिन जस्तै थियो। पाठ्यक्रम सट्टा ट्रंक मा एक वाहन एक सामान कक्ष उपयुक्त छ, त्यहाँ कुनै धूलो र हल्ला इन्सुलेशन राम्रो छ, तर अझै पनि VAZ 21099, निरन्तर आउन समीक्षाएँ जो देखो, आलोचना अन्तर्गत आएको छ। तर समय, मानिसहरूलाई accustomed छन्, र बिस्तारै कार किन्न थाले।
पहिले, नौ ठूलो सडक समातेर र सजिलै, effortlessly, कुनै पनि bends आयोजित। नयाँ कार चालक गम्भीर त्यो कुनामा मा अप भर्न थाले, हैरान। अलिकति, प्रकोप जोखिम बिना, तर व्यवस्थापन मा बेचैनी धेरै देखियो। कारण फिर्ता, पालकी आकार एक hatchback को फारम देखि संक्रमण मा थियो आवश्यक 20 सेमी द्वारा मिसिन को रियर overhang वृद्धि गर्न फैलयो थियो। तपाईं पहिलो स्थानमा कार को स्थिरता मा ट्रंक असर भनेर विचार गर्दा त्यो धेरै राम्रो छ। खाली सामान खण्ड scour गर्न मिसिन गराउँछ, र अपलोड उनको नाक लिफ्टहरु। तर कुनै पनि मामला मा, किनभने ट्रंक छैन प्रतिरोधी पालकी hatchback छ।
को VAZ 21099 बाँकी, जनसंख्या तुरुन्तै खातामा प्रतिक्रिया लिन थाले, एक सभ्य मिसिन थियो। Transverse पेट्रोल इन्जिन 1.5-लीटर, चार-पाङ्ग्रा ड्राइव, राम्रो wheelbase र प्रारम्भिक नब्बे को सबै भन्दा राम्रो मोडेल एक बराबरीको धारण कार को प्रभावकारी दोहरी-सर्किट ब्रेक लगान प्रणाली। र ईन्जिनियर AvtoVAZ को कोर आदर, छोटो समयमा नयाँ नौ धेरै संशोधनहरू उनको प्रतिष्ठा बलियो कि पर्याप्त वजन प्राप्त गरेको छ। को VAZ 21099, सम्पूर्ण नकारात्मक समीक्षा भेला जब यो सफलतापूर्वक बाहिर गरिएका परिमार्जनहरू को एक नम्बर को लागि गति थियो एक समय थियो।
21099-00 परिमार्जन VAZ: एक साथ इन्जिन सम्पर्क ज्वलन, carb-नियन्त्रण गर्ने सानो घर बाट, उन्नत गुणवत्ता संग 083 को एक सेट र ढोका भित्री मा ड्यासबोर्ड। यो मेशिनमा काम-बोर्ड प्रणाली नियन्त्रण थियो। को VAZ 21099-02 को निम्न परिमार्जन गर्ने पछाडिको सीट backrest मा टाउको restraints थपियो। VAZ 21099, साधारण राम्रो भएको प्राविधिक विशेषताहरु जो, एक अधिक आरामदायक सानो घर चाहिएको छ। शक्ति विन्डो, ढोका लक, राज्य: र VAZ कार 21099-04 को संशोधन धेरै सुधार ल्याएको कुहिरो रोशनी, पछिल्लो सीट टाउको restraints, सबै सिट र backrests मा प्राकृतिक गद्दी, velor असबाब, अपग्रेड साधन प्यानल 2115, र अन्तमा पूर्ण-बोर्ड नियन्त्रण प्रणाली।
VAZ 21099-22 प्राप्त इंजेक्शन इन्जिन एक माइक्रोप्रोसेसर संग, र Wha 21099-04 थिए जो माथि विकल्प, सबै। VAZ 21099-91 को अन्तिम परिमार्जन - को स्थापना संग को रोटरी-पिस्टन इन्जिन VAZ 415, एक सानो इन्जिन क्षमता, तर उसलाई कार को 190 मी / घन्टा एक गति विकास गरे। हाल विशेषता VAZ 21099 - मिसिन माग छ, निरंतर सकारात्मक छ।
किन गरिबी चुलो 2114 रोशनी? समस्या फिक्सिंग को लागि सुझाव
शेवरलेट एसएस - हुड भमरा अन्तर्गत लुकाउने
जर्मन "मुद्रा» बीएमडब्ल्यू 118i
"टाटा-एक्सेन्ट", आफ्नो हात संग समय बेल्ट को प्रतिस्थापन: को Definitive गाइड, सुविधा र सिफारिसहरू
एक जगिङ छनौट - स्वास्थ्य सुधार
छाते Fulton - सुन्दर र सहज सामान
Repatriation - यो के हो? कसले repatriation गर्ने अधिकार छ र यो कसरी उत्पादन छ?
प्रार्य गठन सूप - kyufta-bozbash, लाब्रे, grar। प्रार्य गठन भोजन
इस्लाम मा तिनको पतिको पत्नीको कर्तव्य। के पत्नी हुनुपर्छ? परिवार परम्पराको र इस्लाम मा विवाह
श्रृंखला "काले टावर": प्लट मा एक आँखा संग अर्डर पुस्तकहरू
धातु hangar पूर्वनिर्मित पूर्वनिर्मित: परियोजनाहरु, निर्माण
Sevastopol, एक पानी पार्क "Zurbagan" - समीक्षा